【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】အစာဟောငျးအိမျ ကငျဆာ (CA Rectum) | Opinion Leaders
လူတှရေဲ့ နထေိုငျစားသောကျမှုပုံစံနဲ့ မြိုးရိုးဗီဇပွောငျးလဲမှုတှကွေောငျ့ ကငျဆာရောဂါ ဖွဈပှားမှုနှုနျးဟာ မြားလာပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ တှရေ့မြားတဲ့ ကငျဆာအမြိုးအစားတှထေဲမှာ အစာဟောငျးအိမျကငျဆာ (CA Rectum) လညျး အပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ အသကျ၄၀ အထကျ အရှယျတှမှော ပိုတှရေ့တတျပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျး အသကျငယျတဲ့သူတှမှောလညျး ဖွဈလာတာတှရေ့ပါတယျ။ အစာဟောငျးအိမျကငျဆာဖွဈရခွငျးဟာ အသကျအရှယျ ကွီးခွငျးနှငျ့ မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျသလို စားသောကျနထေိုငျမှုပုံစံနဲ့လညျး ဆကျစပျပါတယျ။
အစာဟောငျးအိမျ (Rectum) က sigmoid colon လို့ ချေါတဲ့ အူမကွီးရဲ့နောကျဆုံးအပိုငျးနဲ့ စအိုပေါကျ anus ရဲ့ကွားမှာရှိတဲ့ ၁၂-၁၆စငျတီမီတာလောကျရှညျတဲ့ အူရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုပါ။ စအိုပေါကျက ဝမျးမသှားခငျမှာ faeces ဝမျးတှကေို သိုလှောငျထားတဲ့ အပိုငျးလညျးဖွဈတယျ။
(၁)မိသားစုမြိုးရိုးမှာ အစာဟောငျးအိမျကငျဆာနဲ့ အူမကွီးကငျဆာဖွဈဖူးခွငျး (Genectic predisposition)
(၂)အူမကွီးနဲ့ အစာဟောငျးအိမျမှာ polyps လို့ချေါတဲ့ အသားလုံးမြား ရှိခွငျး
(၃)နာတာရှညျ အူရောငျရမျးခွငျး (Ulcerative colitis or Crohn's colitis)
(၄)ဟငျးသီးဟငျးရှကျ အစားနညျးပီး (Red meat) အသားစားတာမြားခွငျး
(၅)Acromegaly လို့ချေါတဲ့ ကွီးထှားမှုဟျောမုနျးမြားတဲ့ ရောဂါရှိခွငျး
(၇)ဝမျးဗိုကျ အောကျပိုငျး ဓါတျရောငျခွညျ ကုသမှုခံဖူးခွငျး (Pelvic RT) တို့ဖွဈပါတယျ။
အစာဟောငျးအိမျကငျဆာကို ပုံစံသုံးမြိုးနဲ့ တှနေို့ငျသညျ။
(၁)Papilliferous or cauliflower like growth (အကြိတျပုံစံ)
(၂)Ulcerative type (အနာပုံစံ)
(၃)Annular type (ဘေးနံရံပတျပတျလညျ ကဉျြးတဲ့ ပုံစံ) တို့ဖွဈပါတယျ။
အစာဟောငျးအိမျကငျဆာ (CA Rectum) ရဲ့ ရောဂါလက်ခဏာမြား
(၁)ဝမျးထဲမှာ သှေးပါခွငျး (Dark red blood streak in stool)
(၂)အခြှဲပါခွငျး (Mucus in stool)
(၃)ဝမျးခြုပျလိုကျ ဝမျးလြှောလိုကျ ဖွဈခွငျး (Change in bowel habit)
(၄)ဝမျးသှားခငျြသလို ဗိုကျရဈရဈနာပီး အခြှဲတှပေဲ သှားခွငျး (Tenesmus)
(၅)သိသိသာသာ ပိနျသှားခွငျး (Weight loss) တို့ဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၄၀ အထကျ မှာ အပျေါမှာပွောတဲ့လက်ခဏာတှရှေိရငျတော့ အူမကွီးနဲ့ အစာဟောငျးအိမျကငျဆာ ဖွဈနိုငျခရြှေိတာကွောငျ့ အမွနျဆုံး စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
ဘယျလို စဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျနိုငျလဲ?
၁) Digital rectal examination လို့ချေါတဲ့ စအိုအတှငျးသို့ လကျဖွငျ့ စမျးသပျကွညျ့ရငျတော့ အစာဟောငျးအိမျအောကျပိုငျးမှာဖွဈတဲ့ ကငျဆာအကြိတျ သို့မဟုတျ အနာကို စမျးမိနိုငျပါတယျ။ အပျေါဘကျရောကျတဲ့ ကငျဆာတှကေိုတော့ စမျးလို့မမိနိုငျပါဘူး။
၂) အူလမျးကွောငျး ကို မှနျပွောငျးဖွငျ့စဈဆေးခွငျး (Sigmoidoscope or colonoscope) ပွုလုပျပီး အသားစယူစဈဆေးခွငျးဖွငျ့လညျး ရောဂါရှာတှနေို့ငျပါတယျ။
၃) ဒါ့အပွငျ သှေးထဲမှာ CEA လို့ချေါတဲ့ tumour marker လညျး စဈကွညျ့ရငျ မြားနနေိုငျပါတယျ။
၄)အခွားနရောတှထေိပါ ပြံ့/မပြံ့သိဖို့အတှကျ CT, MRI စတဲ့ စဈဆေးမှုတှလေညျး လုပျရမှာပါ။
အစာဟောငျးအိမျ ကငျဆာ အဆငျ့သတျမှတျခွငျး (Staging)
အဆငျ့ ၁ - ကငျဆာက mucosa ကိုဖောကျပွီး အူနံရံ ကွှကျသားအလှာ muscularis layer အထိရောကျပမေယျ့ အနီးအနား က တဈရှူးတှနေဲ့ ပွနျရညျကွော lymph node တှထေိ မပွနျ့သေးခွငျး (T1 or T2,N0,M0)
အဆငျ့၂ - ကွှကျသားအလှာကို ဖောကျသှားခွငျး (T3N0M0) (သို့ ) ကွှကျသားအလှာအပွငျ ဝမျးဗိုကျရဲ့ အလှာ visceral peritoneum ထိရောကျခွငျး (T4a N0 M0) (သို့ )အနီးအနားက တဈရှူးတှထေိပွနျ့နခွေငျး (T4b N0 M0)
အဆငျ့ ၃ - အနီးအနားက ပွနျရညျကွော lymph nodes တှအေထိ ပွနျ့သျောလညျး ခန်ဓာကိုယျ အခွားနရောမြားသို့မပွနျ့သေးခွငျး (T1-4,N1or 2,M0)
အဆငျ့ ၄ - အခွား ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးထိ ကငျဆာဆဲလျပြံ့နခွေငျး Any T,any N with M1
ကငျဆာအကြိတျ အရှယျအစား နဲ့ တညျနရောပျေါမူတညျပွီး ခှဲစိတျမှုကှာခွားနိုငျပါတယျ။
- Abdominoperineal resection (APR) ကငျဆာအကြိတျရော စအိုပါ ထုတျပဈပီး ဝမျးဗိုကျမှာ ဝမျးစှနျ့ဖို့ အပေါကျဖောကျထားတဲ့ နညျးကတော့ စအိုပေါကျနဲ့နီးတဲ့ အကြိတျတှမှော လုပျလရှေိ့ပီး ကုနျစငျအောငျထုတျနိုငျရငျတော့ ပြောကျကငျးတဲ့ထိ ကုနိုငျပါတယျ။
- Low Anterior Resection (ARR) စအိုပေါကျခနျြထားတဲ့ ခှဲစိတျခွငျးကတော့ အပျေါဘကျရောကျတဲ့ အကြိတျတှမှောလုပျလရှေိ့ပါတယျ။
ကငျဆာအကြိတျအရှယျကွီးရငျ မခှဲခငျမှာ ကငျဆာဆေးသှငျးခွငျးနှငျ့ ဓာတျရောငျခွညျနှငျ့ ကုသခွငျး (Neoadjuvant therapy) အရငျလုပျပီးမှ ခှဲခွငျးက ပိုထိရောကျတယျလို့ ဆိုကွတယျ။
၂ ) ကငျဆာ ဆေးသှငျးကုသခွငျး (Chemotherapy)
အဆငျ့ ၃ ရှိတဲ့ ကငျဆာသမားတှမှောတော့ ခှဲပီးလို့ ကငျဆာ ဆေးသှငျးခွငျး (Adjuvant chemo) က နောကျတကွိမျပွနျဖွဈခွငျး ကိုနညျးစပေါတယျ။
၃ ) ဓါတျရောငျခွညျဖွငျ့ ကုသခွငျး (Radiotherapy)
မြားသောအားဖွငျ့ မခှဲခငျ အရှယျသေးအောငျ ပေးခွငျး သို့မဟုတျ ခှဲစိတျပီးနောကျတကွိမျပွနျဖွဈနိုငျခြေ local recurrence မြားတဲ့ လူနာတှမှောသာ ပေးလရှေိ့ပါတယျ။
လူတွေရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ များလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ရများတဲ့ ကင်ဆာအမျိုးအစားတွေထဲမှာ အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ (CA Rectum) လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၄၀ အထက် အရွယ်တွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း အသက်ငယ်တဲ့သူတွေမှာလည်း ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ရခြင်းဟာ အသက်အရွယ် ကြီးခြင်းနှင့် မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့လည်း ဆက်စပ်ပါတယ်။
အစာဟောင်းအိမ် (Rectum) က sigmoid colon လို့ ခေါ်တဲ့ အူမကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းနဲ့ စအိုပေါက် anus ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ ၁၂-၁၆စင်တီမီတာလောက်ရှည်တဲ့ အူရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ စအိုပေါက်က ဝမ်းမသွားခင်မှာ faeces ဝမ်းတွေကို သိုလှောင်ထားတဲ့ အပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်။
(၁)မိသားစုမျိုးရိုးမှာ အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ဖူးခြင်း (Genectic predisposition)
(၂)အူမကြီးနဲ့ အစာဟောင်းအိမ်မှာ polyps လို့ခေါ်တဲ့ အသားလုံးများ ရှိခြင်း
(၃)နာတာရှည် အူရောင်ရမ်းခြင်း (Ulcerative colitis or Crohn's colitis)
(၄)ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစားနည်းပီး (Red meat) အသားစားတာများခြင်း
(၅)Acromegaly လို့ခေါ်တဲ့ ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းများတဲ့ ရောဂါရှိခြင်း
(၇)ဝမ်းဗိုက် အောက်ပိုင်း ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုသမှုခံဖူးခြင်း (Pelvic RT) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာကို ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့ တွေ့နိုင်သည်။
(၁)Papilliferous or cauliflower like growth (အကျိတ်ပုံစံ)
(၃)Annular type (ဘေးနံရံပတ်ပတ်လည် ကျဉ်းတဲ့ ပုံစံ) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ (CA Rectum) ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ
(၁)ဝမ်းထဲမှာ သွေးပါခြင်း (Dark red blood streak in stool)
(၂)အချွဲပါခြင်း (Mucus in stool)
(၃)ဝမ်းချုပ်လိုက် ဝမ်းလျှောလိုက် ဖြစ်ခြင်း (Change in bowel habit)
(၄)ဝမ်းသွားချင်သလို ဗိုက်ရစ်ရစ်နာပီး အချွဲတွေပဲ သွားခြင်း (Tenesmus)
(၅)သိသိသာသာ ပိန်သွားခြင်း (Weight loss) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၄၀ အထက် မှာ အပေါ်မှာပြောတဲ့လက္ခဏာတွေရှိရင်တော့ အူမကြီးနဲ့ အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကြောင့် အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လို စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်လဲ?
၁) Digital rectal examination လို့ခေါ်တဲ့ စအိုအတွင်းသို့ လက်ဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်ရင်တော့ အစာဟောင်းအိမ်အောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာအကျိတ် သို့မဟုတ် အနာကို စမ်းမိနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်ဘက်ရောက်တဲ့ ကင်ဆာတွေကိုတော့ စမ်းလို့မမိနိုင်ပါဘူး။
၂) အူလမ်းကြောင်း ကို မှန်ပြောင်းဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း (Sigmoidoscope or colonoscope) ပြုလုပ်ပီး အသားစယူစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်လည်း ရောဂါရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
၃) ဒါ့အပြင် သွေးထဲမှာ CEA လို့ခေါ်တဲ့ tumour marker လည်း စစ်ကြည့်ရင် များနေနိုင်ပါတယ်။
၄)အခြားနေရာတွေထိပါ ပျံ့/မပျံ့သိဖို့အတွက် CT, MRI စတဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေလည်း လုပ်ရမှာပါ။
အစာဟောင်းအိမ် ကင်ဆာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Staging)
အဆင့် ၁ - ကင်ဆာက mucosa ကိုဖောက်ပြီး အူနံရံ ကြွက်သားအလွှာ muscularis layer အထိရောက်ပေမယ့် အနီးအနား က တစ်ရှူးတွေနဲ့ ပြန်ရည်ကြော lymph node တွေထိ မပြန့်သေးခြင်း (T1 or T2,N0,M0)
အဆင့်၂ - ကြွက်သားအလွှာကို ဖောက်သွားခြင်း (T3N0M0) (သို့ ) ကြွက်သားအလွှာအပြင် ဝမ်းဗိုက်ရဲ့ အလွှာ visceral peritoneum ထိရောက်ခြင်း (T4a N0 M0) (သို့ )အနီးအနားက တစ်ရှူးတွေထိပြန့်နေခြင်း (T4b N0 M0)
အဆင့် ၃ - အနီးအနားက ပြန်ရည်ကြော lymph nodes တွေအထိ ပြန့်သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် အခြားနေရာများသို့မပြန့်သေးခြင်း (T1-4,N1or 2,M0)
အဆင့် ၄ - အခြား ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းထိ ကင်ဆာဆဲလ်ပျံ့နေခြင်း Any T,any N with M1
ကင်ဆာအကျိတ် အရွယ်အစား နဲ့ တည်နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲစိတ်မှုကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
- Abdominoperineal resection (APR) ကင်ဆာအကျိတ်ရော စအိုပါ ထုတ်ပစ်ပီး ဝမ်းဗိုက်မှာ ဝမ်းစွန့်ဖို့ အပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ နည်းကတော့ စအိုပေါက်နဲ့နီးတဲ့ အကျိတ်တွေမှာ လုပ်လေ့ရှိပီး ကုန်စင်အောင်ထုတ်နိုင်ရင်တော့ ပျောက်ကင်းတဲ့ထိ ကုနိုင်ပါတယ်။
- Low Anterior Resection (ARR) စအိုပေါက်ချန်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်ခြင်းကတော့ အပေါ်ဘက်ရောက်တဲ့ အကျိတ်တွေမှာလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ကင်ဆာအကျိတ်အရွယ်ကြီးရင် မခွဲခင်မှာ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်နှင့် ကုသခြင်း (Neoadjuvant therapy) အရင်လုပ်ပီးမှ ခွဲခြင်းက ပိုထိရောက်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။
၂ ) ကင်ဆာ ဆေးသွင်းကုသခြင်း (Chemotherapy)
အဆင့် ၃ ရှိတဲ့ ကင်ဆာသမားတွေမှာတော့ ခွဲပီးလို့ ကင်ဆာ ဆေးသွင်းခြင်း (Adjuvant chemo) က နောက်တကြိမ်ပြန်ဖြစ်ခြင်း ကိုနည်းစေပါတယ်။
၃ ) ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်း (Radiotherapy)
များသောအားဖြင့် မခွဲခင် အရွယ်သေးအောင် ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ပီးနောက်တကြိမ်ပြန်ဖြစ်နိုင်ချေ local recurrence များတဲ့ လူနာတွေမှာသာ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။